ယခုနှစ် ရန်ကုန် သင်္ကြန် ပွဲတော်အတွက် စည်းကမ်းချက် ၃၉ ချက်ထုတ်ပြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ယခုနှစ် ရန်ကုန် သင်္ကြန် ပွဲတော်အတွက် စည်းကမ်းချက် ၃၉ ချက်ထုတ်ပြန်
ယခုနှစ် ရန်ကုန် သင်္ကြန် ပွဲတော်အတွက် စည်းကမ်းချက် ၃၉ ချက်ထုတ်ပြန်
Posted by Bayote on Apr 2, 2010 in Myanma News, News |7comments
ရန်ကုန် သင်္ကြန်ပွဲတော်အတွက် ရေကစားမဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခွင့်များအား စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး သင်္ကြန်နှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းချက် ၃၉ ချက်ကို မဏ္ဍပ်များနေရာချထားပေးရေးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီမှထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရသည်။ ယခုနှစ် သင်္ကြန်အတွက်ထုတ်ပြန်သည့် စည်းကမ်းချက် ၃၉ ခုအနက်အများစုမှာပြီးခဲ့သည့် နှစ်များကတည်းကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စည်းကမ်းချက်များ ဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းချက်အချို့မှာ ယခုနှစ်တွင်မှ အသစ်ထပ်တိုးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ အသစ်ထပ်ထုတ်သော စည်းကမ်းတွင် မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်း ဖော်ကျူးသည့် အနေဖြင့် သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်အားလုံးသည် ဖွင့်ပွဲနေ့၌ ငွေဖလားတွင် အမွှေးနံ့သာရည် ထည့်၍ ရေကစားခြင်းကို ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်ရန်အချက် ပါရှိပါသည်။
ထို့ပြင် မဏ္ဍပ်ကြော်ငြာများတွင် အရက်၊ ဘီယာ၊ စီးကရက်၊ ဆေးလိပ်နှင့် ပတ်သက်သော ကြော်ငြာများထည့်သွင်းခွင့် မပြုကြောင်းလည်းမဟာသင်္ကြန်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၏ ယခုနှစ် သင်္ကြန် နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များအရသိရသည်။ မဟာသင်္ကြန်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီက ယခုနှစ် သင်္ကြန် ကာလတွင် လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ထားပြီးနောက်ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကလည်း သင်္ကြန်ကာလတွင် ရေကစားမဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ရေဆက်သွယ်သုံးစွဲခြင်းများအတွက် သတ်မှတ်နှုန်းထားများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ သင်္ကြန် မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရုံးများမှ တစ်ဆင့် လျှောက်ထား ရမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်ရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ထို့ပြင် သင်္ကြန် မဏ္ဍပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက် ဆောက်လုပ်မည့် မဏ္ဍပ်အရွယ်အစားအလိုက် မြေအသုံးပြုခ၊ ရေဆက်သွယ်သုံးစွဲခနှင့် သန့်ရှင်းရေး ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ ကြိုတင်ပေးသွင်းထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ပေ ၁၀၀ ရှိသော ကုမ္ပဏီ ကြီးများ အနေဖြင့် လမ်းတံတားကြေး ကျပ် ၇၀၀၀၀ နှင့် သန့်ရှင်ရေးဝန်ဆောင်ခကျပ် ၅၀၀၀၀ ပေးသွင်းရပြီး ပေ ၅၀ ရှိသော မဏ္ဍပ် (အလတ်)များ အနေဖြင့် လမ်းတံတားကြေးကျပ် ၅၀၀၀၀ နှင့်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်ခကျပ် ၃၀၀၀၀ ကိုပေးသွင်းရကာ ၂၅ ပေအောက် မဏ္ဍပ်(အသေး)များအနေဖြင့် လမ်းတံတားကြေးကျပ် ၂၀၀၀၀ နှင့်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်ခ ကျပ် ၂၀၀၀၀ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ရေ ဆက်သွယ်ခ အနေဖြင့် ၂ လက်မပိုက်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါက ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ ဖြစ်ပြီး ၁ လက်မနှင့် ၁ လက်မခွဲ ပိုက်တို့ဖြင့် ဆက်သွယ်ပါက ကျပ် ၆၀၀၀၀ တို့ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့ထုတ် Bi Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
လမ်းတံတားကြေး ကျပ် ၇၀၀၀၀ နှင့် သန့်ရှင်ရေးဝန်ဆောင်ခကျပ် ၅၀၀၀၀....
သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်ခက လက်ခံလို့ရပေမယ့် လမ်းတံတားကြေးဆိုတာကြီးက ထူးဆန်းတယ်ဗျာ။
ရေ ဆက်သွယ်ခ အနေဖြင့် ၂ လက်မပိုက်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါက ကျပ် ၁၀၀၀၀၀
ရေသွယ်ခကဟုတ်ပါပြီ ရေက လာမှာလား :)
စည်းကမ်းပြည့်ဝသော နိုင်ငံကြီးမှာ ပြည်သူ တွေရဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကို စနစ်တကျငွေတောင်းခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ် နအဖ ပါ။
ဆင်ဆာ …. ဆိုတာ ……နှစ် ပေါင်း ၂၃ နှစ် .တိတိ..အနော်… နားထောင်ဖူးတဲ့ ..ခေတ်စာသား ပါ….ဆင်ဆာ ..ယူမယ်နော်..
hoat tal khaung shan pyaw tar kg tal.
(ထို့ပြင် မဏ္ဍပ်ကြော်ငြာများတွင် အရက်၊ ဘီယာ၊ စီးကရက်၊ ဆေးလိပ်နှင့် ပတ်သက်သော ကြော်ငြာများထည့်သွင်းခွင့် မပြုကြောင်းလည်းမဟာသင်္ကြန်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၏ ယခုနှစ် သင်္ကြန် နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များအရသိရသည်။)
နှစ်တိုင်းတော့ပြောတာပဲ..နောက်တော့လည်း သူတို့အမျိုး ကုပ္မဏီတွေ ထုတ်တဲ့ ဆေးလိပ် ကြော်ငြာ မဏ္ဍပ်တွေ